Nezvedu - Nanjing Karlter Kushongedza Zvinhu Co, Ltd.
Nanjing Karlter Kushongedza Zvishandiso Co., Ltd.ikambani nyowani nyowani inoshandiswa mukutengesa kwevinyl flooring, SPC yakaoma solid core vinyl flooring uye laminate flooring. Iyo kambani iri kumabvazuva kweChina uye iri nyore kwazvo kusvika kuShanghai Port. Isu tinotengesa kunze huwandu hwakawanda hwetafura kuEurope, North America, South America, Australia, South Africa, nezvimwe gore rega. DIBT, Floorscore certification isu takapfuura, isu tinovimbisa mhando kutanga, uye timu yedu yehunyanzvi yekuongorora timu inovimbisa kuti isu tinogona kuwana hwakanakisa mhando.
Zvigadzirwa zvedu zvakasiyana muhukuru uye ukobvu, uye nemarudzi akasiyana siyana kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi. Panguva imwecheteyo, isu tinogona zvakare kugadzira iyo EIR embossing uye yepamusoro kurapwa. Iko kusimbisa pamusoro penyika zvakare kwakasiyana. Isu tinotsigira kugadzirwa kweOEM uye pasuru zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kuti vawane kugutsikana kwevatengi.
Yedu-yekutengesa sevhisi iri zvakare kushingairira kuteerera kune pfungwa dzevatengi. Isu tichashingairira kupa mhinduro dzekugadzirisa kurasikirwa kwevatengi nekuda kwemabasa edu. Ehezve, chirevo chedu chekutsvaga kukwana kudzikisira kuitika kwezviitiko zvakadaro, nekudaro kuzadzisa kubatana kwakabatana kwemativi ese, tiri shamwari yako yaunovimba nayo, ngatifambei timbopinda mune ramangwana rekutandara pamwechete.
Iyo hombe mbishi yekugadzirwa kwePVF flooring ndeye polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride inochengetedza zvakatipoteredza uye haina-chepfu inogona kudzoreredzwa sosi. Yakave ichishandiswa muhupenyu hwevanhu hwezuva nezuva, senge asiri-echikafu mabhegi egiragi, mabhegi emarara, zvigadzirwa zvekuvaka, nezvimwewo Pakati pavo, chikuru chikamu chebwe-repurasitiki pasi (jira) hupfu hwebwe hwepanyama. Inoedzwa nedhipatimendi rine chiremera uye haina chero chinhu chine radioactive. Iyo zvakare iri nharaunda-inoshamwaridzika pasi yekushongedza zvinhu. Chero anokwanisa PVC pasi inoda kupfuura IS09000 yepasi rese mhando system chitupa uye ISO14001 yepasi rose green green certification.
Ultra-mwenje uye yakasviba-yakatetepa
Iyo PVC pasi inongova 1.6mm-9mm gobvu, uye huremu pa mita imwe chete inongova 2-7KG. Iine mikana isingaenzaniswi yekuvaka uremu uye kuchengetedza nzvimbo munzvimbo, uye ine zvayakanakira mukugadzirisa zvivakwa zvekare.
Super vanopfeka nemishonga
Iko pamusoro pePVC pasi kune yakasarudzika yepamusoro-tekinoroji yekugadzirisa yakajeka yekupfeka-isinga nyatso. Iyo super-hasha dura yakanyatso kurapwa pamusoro pevhu inovimbisa yakanakisa kupfeka kusagadzikana kwepasi zvinhu. Iyo yekupfeka-isinganetsi denderedzwa pamusoro peiyo PVC pasi yakasarudzika zvinoenderana neukobvu. Mumamiriro akajairwa mamiriro, inogona kushandiswa kwe5-10 makore. Ukobvu uye mhando yeiyo yekupfeka nhete inonongedza nguva yekushandisa yeiyo PVC pasi. Mhedzisiro mhedzisiro mhedzisiro inoratidza kuti iyo 0.55mm gobvu yekupfeka nhete inogona kushandiswa pasi peyakajairika mamiriro kweanopfuura makore mashanu, 0.7mm. Iyo gobvu yekupfeka-inodzivirira yakatetepa inokwana makore anopfuura gumi, saka yakanyanyisa kupfeka. Nekuda kweiyo yepamusoro yekupfeka kuramba, PVC pasi iri kuwedzera kuve inozivikanwa muzvipatara, zvikoro, zvivakwa zvemahofisi, zvitoro, zvitoro, zvekufambisa nedzimwe nzvimbo dzine traffic yakawanda.
Kuwedzera kwekusimba uye kurwisa kwakanyanya
Iyo PVC pasi yakapfava mukugadzirwa, saka ine kusimba kwakanaka. Iyo ine yakanaka elastic kudzora pasi pekukanganiswa nezvinhu zvinorema. Mucherechedzo wepasi rakarongedzwa wakapfava uye unowedzera kusimba. Iko kunyaradzwa kwetsoka kunodaidzwa kuti "goridhe rakapfava muvhu", nepo PVC pasi iine Iyo ine simba rakasimba rekurwisa uye ine yakasimba elastic kupora kweinorema kukanganisa kukuvara pasina kukuvara. Iyo yakanakisa PVC pasi inogona kudzora kukuvara kwevhu kumuviri wemunhu uye inogona kuparadzira kukanganisa kwetsoka. Iyo yazvino dhata yekutsvagisa inoratidza kuti vashandi vakadonha apo yakanakisa PVC pasi yakavezwa munzvimbo ine kuyerera kukuru kwevanhu. Uye mwero wekukuvara unenge 70% wakaderera kupfuura mamwe pasi.
Iyo yekupfeka nhete yeiyo PVC pasi pevhu ine yakasarudzika anti-slip chivakwa, uye ichienzaniswa neyakajairika pasi zvinhu, iyo PVC pasi inonzwa yakasimba zvakanyanya kana iri mvura inonamira, uye iri shoma mukana wekutsvedza, ndiko kuti, kunyanya iyo mvura yapwanywa. Naizvozvo, munzvimbo dzeveruzhinji umo zvido zvekuchengetedza veruzhinji zvakakwirira, senge nhandare dzendege, zvipatara, kindergartens, zvikoro, nezvimwe, ndizvo zvakasarudzika zvepasi pekushongedza zvinhu, izvo zvave kufarirwa kwazvo muChina mumakore achangopfuura.
Iyo inodzivirira moto indekisi yePVC pasi inogona kusvika padanho reB1, uye iyo B1 giredhi zvinoreva kuti kuita kwemoto kwakanaka kwazvo, kechipiri chete kudombo. PVC flooring pachayo haitsve uye inogona kudzivirira kupisa; haina kuburitsa magasi ane chepfu uye anokuvadza anochengeta nguva (zvinoenderana nenhamba yakapihwa nebazi redziviriro: 95% yevanhu vakakuvara mumoto hutsi hunokachidza uye magasi anogadzirwa nekutsva To).
Isina mvura uye hunyoro chiratidzo
Nekuti chikuru chikamu chePVC yekushongedza ndeyevinyl resin uye haina hukama nemvura, zviri muropa kwete kutya mvura. Chero bedzi isina kunyoroveswa kwenguva yakareba, haizokuvadzwa; uye haizo nyororwe nekuda kwehunyoro hunyoro.
Kutora ruzha uye kudzikisira ruzha
PVC pasi ine zvinhu zvakajairika zvepasi izvo zvisingakwanise kuenzanisa kunzwiwa kwezwi, uye kunamwa kwayo kwezwi kunogona kusvika makumi maviri emadhivhuru, saka unofanirwa kusarudza PVC pasi munzvimbo dzakanyarara senge mawadhi ezvipatara, maraibhurari echikoro, dzimba dzekudzidzisa, dzimba dzemitambo, nezvimwe. yekugogodza kwepasi inokanganisa kufunga kwako uye pasi rePVC rinogona kukupa inzvimbo yakasununguka uye ine hunhu yekugara.
Iko pamusoro pePVC pasi kwakarapwa neakasarudzika antibacterial kurapwa. Iko pamusoro peiyo PVC pasi yakave zvakare yakanyatso kuwedzerwa nemaantibhakitiriya evamiririri. Iyo ine simba rakasimba rekuuraya uye inodzivirira kugona kwebhakitiriya kubereka kune akawanda mabhakitiriya.
Kucheka uye kurira kuri nyore uye nyore
Nebanga rakanaka rekushandisa, unogona kuricheka pamadiro, uye unogona kushandisa mubatanidzwa wezvinhu zvemavara akasiyana kuti upe kutamba kuzere kune hunyanzvi hwekugadzira uye uwane akanakisa ekushongedza; zvakakwana kuti ivhu rako rive basa rehunyanzvi uye nekuita hupenyu hwako Space yave imba yeumambo, izere nehunyanzvi.
Small musono uye musono nomoto
Ruvara rwakakosha rwePVC pepa raive rakaiswa nekumisikidzwa, iwo mapeti ari madiki kwazvo, uye iwo mapeti anenge asingaonekwe ari kure; iyo PVC coil flooring inogona kunge isina musono zvachose neisina musono kuwelda tekinoroji, izvo zvisingaite kune zvakajairwa flooring. Naizvozvo, kuita kwese uye kuona kwevhu kunogona kukwidziridzwa kusvika padanho repamusoro; munzvimbo ine hunyanzvi hwevhu hwakanyanya, senge hofisi, uye nharaunda inoda sterilization yepamusoro uye disinfection, senge imba yekuvhiya chipatara, PVC pasi inokodzera.
Kurumidza kuisa uye kuvaka
Kuisirwa uye kuvakwa kwePVF flooring kwakakurumidza, hapana simende dhaka inoshandiswa, uye pasi mamiriro akanaka. Inosungirirwa neakasarudzika ekudzivirira kwekuchengetedza uye inogona kushandiswa mushure maawa makumi maviri nemana.
Mavara akasiyana siyana
PVC flooring ine akasiyana siyana mavara, akadai kapeti, dombo, huni huriri, nezvimwewo, uye zvinogona kutogadzirwa. Mitsara yacho ndeyechokwadi uye yakanaka, ine zvigadzirwa zvine mavara uye micheka yekushongedza, iyo inogona kusanganiswa kune yakanaka yekushongedza maitiro.
Acid uye alkali ngura kuramba
Kwayedzwa nemasangano ane chiremera, PVC pasi ine yakasimba acid uye alkali ngura kuramba, inogona kumira muyedzo weyakaomarara nharaunda, uye inokodzera kwazvo kushandiswa muzvipatara, mumarabhoritari, ekutsvagisa masangano nedzimwe nzvimbo.
Iyo PVC pasi ine yakanaka yekupisa conductivity, yunifomu kupisa kupisa, uye diki yekupisa yekuwedzera yekuwedzera, iyo yakagadzikana. MuEurope, America, Japan neSouth Korea, PVC flooring ndiyo yekutanga sarudzo yekupisa kwepasi uye kupisa kuputira, iyo inokodzera kwazvo kugadzirwa kwepamba, kunyanya munzvimbo dzinotonhora dzekuchamhembe kweChina.
Iyo yekuchengetedza iyo PVC pasi iri nyore kwazvo, uye pasi iri yakasviba uye inopukutwa nemopu. Kana iwe uchida kuchengetedza pasi kuti igare, iwe unongofanirwa kuita kugara uchichengeta waxing, iyo iri yakadzika kwazvo kupfuura mamwe pasi.
Zvakatipoteredza zvine hushamwari zvinowedzerwazve
Nhasi inguva yekutsvaga kusimudzira kusimudzira. Zvishandiso zvitsva uye nyowani simba zviri kubuda imwe mushure meimwe. PVC pasi ndiyo yega pasi yekushongedza zvinhu zvinogona kudzokororwa. Izvi zvine kukosha kukuru pakuchengetedza zviwanikwa zvedu uye nharaunda.